My point to point rebuttal to Hmuu Zaw’s pathetic cry about the people’s hatred on military | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားအပေါင်းကို ရက်ရက်စက်စက် ချက်ကောင်းချိန်ပစ်သတ်ခဲ့တုန်းက မင်းတို့ သနားတယ် တခွန်း ပြောခဲ့ဖူးသလား …။
Dr Maung Zarni dissects Burma’s or Myanmar’s Reforms,ethnic ceasefire efforts and Rohingya genocide »
My point to point rebuttal to Hmuu Zaw’s pathetic cry about the people’s hatred on military
Not for salary BUT for power, to loot, to rob, to become rich or to RAPE the Ethnic Minorities and Religious Minorities?…they entered the military.
PROOF: IF NO military experience, could not become President! 90% of President, Deputy Presidents, Ministers, Deputy Ministers, DGs, MDs, Directors and cronies are from military. So they enlisted because of greed for power and wealth.
“ဗမာစစ်တပ်” Not true? Where R Muslims, Christians, Ethnic Minorities in your Bama Buddhist Nationalistic Military?
“စစ်သားပဲ စစ်တိုက်ရမှာပေါ့။ သူ့တာဝန်ပဲလေ” ဆိုတဲ့ ပြောကြားချက်တွေ တွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်လည်း အံ့သြထိတ်လန့်မိပါတယ်။ IF U Racoward …why enlisted in military?
သမိုင်းကို အမှန်မြင်ပါ ??? Ha Ha Ha…You Bama Gov is spreading FALSE FAKE HISTORY. U all tried to erase the HISTORY of Muslims: Myanmar Muslims and Rohingyas.
“အစိတ်သားတပ်မတော်” not true? 25% is now changing to an အဆိပ်သားတပ်…
“အစိုးရစစ်တပ်”??? Not true …(Illegal) government’s army? Or you want us to call rebel army?
YES နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိလည်း ရှိမယ်။ Don’t beaFOOL to think like thais…ရှိချင်မှလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ The whole country HATE the Bama military and its leaders.
ပြီးတော့ ကွန်မြူနစ်စာပေတွေ ပြန်လည်ထုတ်ဝေလာကြတယ်။ အရောင်းရဆုံး စာအုပ်တွေက နိုင်ငံရေးစာပေ၊ နိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေ ဖြစ်နေလေတော့ လက်ဝဲစာပေတွေ ပြန်လည် ထုတ်ဝေလာတာ တွေ့ရပါတယ်။…IT IS BECAUSE all the GENERALS and military leaders, their families and cronies became FILTHY RICH. People are dirt poor. So Communist, Socialist political ideas became favourate for the POOR. WAIT…one day…they will doarevolution to KILL all the GENERALS and NATIONALIZED their properties…IT IS TIME TO CHANGE yourself so that U ALL won’t fall too badly.
YES! ဒီမိုကရေစီကို ဗန်းပြပြီး ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ များပြားလာနေပြီး ဥပဒေချိုးဖောက်သူတွေက သူရဲကောင်းတွေ ဖြစ်လာနေတာတွေကိုလည်း တွေ့မြင်ရပါတယ်။ Yes, UR right, 969 Ma Ba Tha, Swarn Arr Shins, Wirathu, Thidagu, Aung Thaung, Khin Nyunt and Swan Arr Shins and Nay Myo Wai are becoming the HEROES of your Cat-Shit President Thein Sein.
တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တချို့ကို မုန်းတီးတာနဲ့…Yes U R right…Remove those cruel greedy power crazy Military leaders: Than Shwe, Thein Sein, Shwe Mann, Min Aung Hlaing, Aung Thaung, Aung Min, Lt General Ko Ko, Htay Oo etc. ARREST THEM. CLEAN the Tatmadaw from all those lousy leaders.
Yes…The problem is there…ဒီကနေ့ အချိန်အထိ ခိုင်မာတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အမျိုးသားရေး အင်စတီကျူးရှင်းဟာ တပ်မတော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။…We don’t want that Bama Buddhist Nationalistic Tatmataw…We want the Union Tatmadaw representing all the Ethnic Minorities and Religious Minorities.
Bloody Sh*t…RU trying to threaten the future NLD Government and the people of Myanmar? လောက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေဟာ ၂၀၁၅ အလွန် လာလတ္တံ့သော အစိုးရတွေအတွက်လည်း အချက်ပေးခေါင်းလောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ OR is this battle justaFAKE STAGED-SHOW between Bama rapist tatmadaw, its Step Father China and PARTNER IN (HEROIN TRADE) CRIME WA and KO-KANTS ….?
HMUU ZAW…UR showing your RACIST colour again…အနောက်ဘက် အရပ်မျက်နှာမှာ ပထ၀ီနိုင်ငံရေးအရ သတိထားရမယ့် မျက်နှာစာတွေ ရှိပါတယ်။ Rohingya Massacre was started by you FALSE news of fully armed Bengali Invaders entering Rakhine. Rocket launchers, Grenades, Automatic Machine Guns with three motorized boats. Now your step fathers are hitting from east. Why bring in your father Rohingya problem.
U R wrong…ပြည်သူနဲ့ တပ်မတော်ကို သွေးကွဲအောင် လုပ်တာတွေဟာ တိုင်းပြည်အတွက် သိပ်ကို အန္တရာယ် ကြီးမားလှပါတယ်။ It id NOT dangerous for the people…BUT dangerous for your Bama Buddhist military and government.
တပ်မတော်ပြိုကွဲအောင် လှုံ့ဆော် စည်းရုံးနေတာတွေ သိပ်ကို ကြောက်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တပ်မတော် ပြိုကွဲပြီ ဆိုရင် အစိတ်အစိတ်အမွှာမွှာ ပြိုကွဲရမှာပါ။ IF U all fail to grantaTRUE DEMOCRATIC FEDERAL UNION….it will divided into pieces.
Yes U R RIGHT, Hmuu Zaw…သမိုင်းကို အမှန်မြင်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါဟာ သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။…You should learn and try to know the true/real Myanmar history, history of Ethnic Minorities and Religious Minorities. STOP trying to erase the true history of Ethnic Minorities and Religious Minorities.
FOLLOWING IS THE MHUU ZAW’S shameless tear teasing post…
သမိုင်းကို အမှန်မြင်ပါ (ပုဂ္ဂလိကအမြင်သာ ဖြစ်ပါသည်)
လောလော လတ်လတ် ကျဆုံးသွားတဲ့ သူ့ဖေဖေရဲ့ ဓါတ်ပုံကို အဖေ အမှတ်နဲ့ နမ်းရှုံ့နေရှာတဲ့ လူမမယ် သမီးငယ်လေးရဲ့ ဓါတ်ပုံကို ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်တော့တဲ့အတွက် ဒီစာကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။
“ဗမာစစ်တပ်” ဆိုပြီး သုံးနှုံးတယ်။ “အစိတ်သားတပ်မတော်” ဆိုပြီး သုံးတယ်။ “အစိုးရစစ်တပ်” ဆိုပြီး ဖော်ပြကြတယ်။ နောက်ဆုံး ဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့် အလှူခံအငြိမ်ပွဲတစ်ခုမှာ သမိုင်းဝင် “ကွမ်လုံရက်လေးဆယ်” ဆိုတာကို ကွန်ဒုံးရက်လေးဆယ် ဆိုပြီး ပြက်လုံးထုတ်တာကို ကြားသိရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့် အငြိမ့်ပွဲတစ်ခုမှာ သူခိုးတွေ၊ စစ်ခွေးတွေ ဆိုပြီး ပြက်လုံးထုတ်တော့ မခံ မရပ်နိုင် ဖြစ်ရတဲ့ စစ်မြေပြင်မှာ ခြေနှစ်ဘက်လုံး ပြတ်ခဲ့ရတဲ့ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတစ်ယောက်က ရေသန့်ဘူးနဲ့ ထပေါက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကိုလည်း ကြားသိရပါတယ်။
အနုပညာရှင်တွေ၊ လူရွှင်တော်တွေရဲ့ ပြောဆိုမှုတွေ၊ ပြက်လုံးတွေက ပြည်သူတွေကြားထဲကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စိမ့်ဝင်ရောက်ရှိစေပါတယ်။ နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိချင်လည်း ရှိမယ်။ ရှိချင်မှလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်လာနေပါတယ်။
“စစ်သားပဲ စစ်တိုက်ရမှာပေါ့။ သူ့တာဝန်ပဲလေ” ဆိုတဲ့ ပြောကြားချက်တွေ တွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်လည်း အံ့သြထိတ်လန့်မိပါတယ်။ စစ်သားတွေဟာ ကြေးစားတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ လခစားဖို့အတွက် စစ်ထဲဝင်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်တွေ ရလာတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်တွေ ရလာတယ်။ ပြီးတော့ ကွန်မြူနစ်စာပေတွေ ပြန်လည်ထုတ်ဝေလာကြတယ်။ အရောင်းရဆုံး စာအုပ်တွေက နိုင်ငံရေးစာပေ၊ နိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေ ဖြစ်နေလေတော့ လက်ဝဲစာပေတွေ ပြန်လည် ထုတ်ဝေလာတာ တွေ့ရပါတယ်။
တစ်ဘက်ပိတ်စာတွေ ဖတ်၊ သမိုင်းကြောင်းကို တစ်ဘက်သတ်အမြင်နဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေ၊ နိုင်ငံရေး အကျိုးစီးပွားကြောင့် တပ်မတော်ကို မုန်းတီးလာအောင်၊ ဆန့်ကျင်လာအောင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတာတွေရဲ့ အကျိုးဆက် လို့ပဲ ယူဆမိပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီကို ဗန်းပြပြီး ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ များပြားလာနေပြီး ဥပဒေချိုးဖောက်သူတွေက သူရဲကောင်းတွေ ဖြစ်လာနေတာတွေကိုလည်း တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဥပဒေချိုးဖောက်သူတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ပြန်ပြီး ကြောက်နေရတဲ့ အခြေအနေကို ဦးတည်နေတာက နိုင်ငံအတွက်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တချို့ကို မုန်းတီးတာနဲ့ တပ်မတော်ကို အပုပ်ချနေကြတာဟာ အမျိုးသား လုံခြုံရေးအတွက် အန္တရာယ်တစ်ရပ် ဖြစ်နေပါတယ်။ နို်င်ငံ့သမိုင်းတစ်လျှောက် တစ်ကယ်တမ်း အသက်ပေးပြီး ကာကွယ်ကြရတာ အဲဒီလို အပုပ်ချခြင်းခံနေရတဲ့ တပ်မတော်သားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ အချိန်အထိ ခိုင်မာတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အမျိုးသားရေး အင်စတီကျူးရှင်းဟာ တပ်မတော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ လောက်ကိုင်ဒေသ တိုက်ပွဲတွေဟာ Tip of the Iceberg ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဘယ်လောက် ထုထည်ကြီးမားတဲ့ ရေခဲတုံးကြီး ရှိနေသလဲ စဉ်းစားကြဖို့ လိုပါတယ်။ လောက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေဟာ ၂၀၁၅ အလွန် လာလတ္တံ့သော အစိုးရတွေအတွက်လည်း အချက်ပေးခေါင်းလောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ဘက် အရပ်မျက်နှာမှာ ပထ၀ီနိုင်ငံရေးအရ သတိထားရမယ့် မျက်နှာစာတွေ ရှိပါတယ်။ အရှေ့ဘက် အရပ်မျက်နျှာမှာ ယနေ့အချိန်အထိ အတည်မပြုနိုင်သေးဘဲ အငြင်းပွားနေရတဲ့ နယ်နိမိတ်မျူဉ်းတွေ ရှိနေပါတယ်။
ပြည်သူနဲ့ တပ်မတော်ကို သွေးကွဲအောင် လုပ်တာတွေဟာ တိုင်းပြည်အတွက် သိပ်ကို အန္တရာယ် ကြီးမားလှပါတယ်။ တပ်မတော်ပြိုကွဲအောင် လှုံ့ဆော် စည်းရုံးနေတာတွေ သိပ်ကို ကြောက်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တပ်မတော် ပြိုကွဲပြီ ဆိုရင် အစိတ်အစိတ်အမွှာမွှာ ပြိုကွဲရမှာပါ။ သမိုင်းကို အမှန်မြင်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါဟာ သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။
This entry was posted on February 13, 2015 at 8:59 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
3 Responses to “My point to point rebuttal to Hmuu Zaw’s pathetic cry about the people’s hatred on military”
February 13, 2015 at 9:02 am | Reply
Maung Maung Skw shared Hmuu Zaw’s photo.
ဒီလိုတွေဖြစ်အောင်…မောင်ရင်တို့ဘဲ…ဖန်တီးခဲ့ကြတာလေ….. အခုမှ..ကွန်မြူနစ်စာပေကြောင့်ဘဲဖြစ်သလိုလို…တတိုင်းတပြည်လုံးက ပြည်သူတွေကဘဲ… အမြင်ကျဉ်းနေကျတာလိုလို…တောင်ရေး…မြောက်ရေး..လျှောက်ရေးနေလို့…တရားခံဘဝက လွတ်မယ်လို့ များထင်နေလား………
နေဝင်းလက်ထက်က စလာခဲ့တဲ့….ဗိုလ်ချုပ်တွေ…မခိုးခဲ့ရင်…တိုင်းပြည်လဲ…ဒီအခြေအနေမရောက်သလို…. စစ်တပ်ကိုလဲ…ဘယ်သူကမှ…စိတ်နဲ့တောင် ပြစ်မှားကြမှာ…မဟုတ်ဘူး…
February 13, 2015 at 9:15 am | Reply
Soe Min Htet added5new photos.
တရုပ်အစိုးရနောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်နေတဲ့ အရှေ.မြောက်ဒေသကျူးကျော်စစ်
ယခုလတ်တလော ကိုးကန်.ဖုန်ကြားရှင်ရဲ.တပ်တွေ မြန်မာ့မြေပေါ်တိုက်ခိုက်နေမှုဖြစ်စဉ်
အားလုံး၏ အရင်းခံမှာအိမ်နီးချင်းကောင်းပီသ သောပေါက်ဖော်ကြီး၏ စနက်ပင်ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်၌ သစ်လာခိုးသောတရုတ်သူခိုးများအားထိန်းသိမ်းထားခြင်းမှ ပြန်လည်
လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုမှုမ အောင်မြင်သောအခါတရုတ်တပ်မ တစ်ခုကိုဖုန်ကြားရှင်
အား ဦးစီးစေလျှက်MNDAA/TNLA/UWSA /KIAအဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်း၍မြန်မာနိုင် ငံ
အ ရှေ့ မြောက် ဖျားရှိနယ်စပ်မြို့များအား တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက် ရန် စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်း။
စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများရိက္ခာနှင့်လူအင် အားများကိုလည်းတရုတ်မှ အဓိက ထောက်ပံ့
မြန်မာနိုင်ငံ လွှတ်တော်အတွင်းရှိတရုတ်သူလျှိုများမှ တဆင့်တပ်မ တော်၏ စစ်သတင်း
များပေါက်ကြားလျှက် ရှိကြောင်းလည်ူ သတင်းများထွက်ပေါ်နေလျက်ရှိပါသည်။
February 13, 2015 at 9:22 am | Reply
Soe Min Htet added2new photos.
တပ်﻿﻿မ﻿﻿တော်﻿﻿သား ၄၆ ﻿﻿ယောက်﻿﻿တပြိုင်﻿﻿
ယမကာကိုမှီဝှဲ KTV. Night Club
မြစ်﻿﻿ကြီးနားက ခလရ ၂၁. ﻿﻿လူနာ﻿﻿တွေ
အဲ့ဒီအချိန်﻿﻿မှာ ခင်﻿﻿ဗျားတို့ ဇနီးမယား
အလုံးအရင်းနဲ့ Shopping ထွက်﻿﻿﻿﻿နေကြတာ
သေလိုက်ကြတဲ့ KIA က ဗိုလ်လောင်းလေးတွေ ။ အဲဒီအထဲမှာ ချင်းတပ်ကလည်းပါသလို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းပါခဲ့တယ်။ သေဆုံးသူတွေရဲ့
ကျန်ရစ်သူ မိသားစု နေရာကရော ဝင်ပြီးတော့ ခံစားကြည့်မိရဲ့လား။
တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုတွေ လည်းသေ
(၇) ဒီမယ်﻿﻿အာဏာရှင်﻿﻿တို့ …
ပင်﻿﻿စင်﻿﻿ယူ﻿﻿တော့လည်း လစာကသိန်းနဲ့ချီပြီး ယူနေတဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို ကြည့်ပြီး
ခင်﻿ဗျားတို့အတွက်﻿﻿ အွန်﻿﻿လိုင်းမှာတက်﻿﻿ပြီး ﻿﻿လော်﻿﻿ဘီလုပ်﻿﻿﻿﻿ပေး﻿﻿နေတဲ့
အာဏာရှင်﻿﻿ ﻿﻿လော်﻿﻿ဘီ ﻿﻿ဘောမ﻿﻿တွေ
ရဲမိုး ၏ အာဏာရှင်﻿﻿ နဲ့ စစ်﻿﻿သား
ဆိုက်﻿﻿ဝါးသုံးသွားသည့် post ကို
၏ ရေးသားချက်အား မဆိုစလောက်လေးဖြည့်စွက်၍ ပြန်လည်၍ မျှဝေပါသည်။﻿